Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fahavonona hiasa | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fahavonona hiasa
Par Les Nouvelles sur 29/11/2018
Na iza na iza voafidy ho filoha tsy hisy na fiovana na fandrosona raha tsy mitombo ny famokarana, ny fitombon’ny vokatra moa tsy tongatonga ho azy raha tsy eo ny ezaka manara-penitra mampiroborobo azy. Rariny raha any amin’ny fambolena no mitodika ny saina raha miresaka an’izany, any ambanivohitra azo hieverina azy mpamboly sy mpiompy no monina ny olona 7 amin’ny 10 eto amin’ny nosy, na eo aza anefa izany tsy mbola mahaleotena Madagasikara na eo amin’ny fahampin’ny vary vokatra anton-tsakafon’ny Malagasy aza. Maika izany raha mihemotra ny fahantrana ka afaka mihinam-bary mahafeno kibo ny olon-drehetra. Tsy eo amin’ny sehatry ny fambolena ihany no tsy ampy ahavita tena ny vokatra eto an-toerana, maro ny karazana entana voatery afarana avy any ivelany. Misy amin’ireny entana ireny anefa no afaka vokarina eto, tsy ny olona andray anjara eo amin’ny asa famokarana an’izany no tsy ampy, maro ireo tsy manan-katao lany andro amin’ny fikarohana asa na manantena am-pitoerana fiantson’ny asa ny tenany. Mifangarongaro eo anivon’ny fiarahamonina ny fanofinofisana fisin’ny asa. Mahalasa fisainana ihany anefa fa hoatran’ny tazana nisy ny fihemorana raha dinihana avy amin’ny fikatonana ozinina toy ireo fanamboarana labozia na afokasoka sy savony. Efa voaresaka teto ihany koa ny fihemotry ny tsena ho an’ny zaitra vita eto an-toerana sy ireo karazana harona vokarin’ny mpanao rary. Asa koa na ny rafitry ny kiraro no niova ka tsy misy intsony ny mpanamboatra ny simba, hany tazana izao ary misy mihitsy aza ny sorabe manondro ny toerana fiasan’ny «mpanjaitra kiraro».
Tsy misy maharatsy ny ezaka ifaninana eo amin’ny fazahona diplôma, samy te hisondrotra daholo, nefa moa ny tontolon’ny asa tsy maharaka ny fitombon’ny zatovo mahazo diplôma, ary matetika tsy mifanandrify ny filan’
ny tontolon’ny asa sy ny zavatra ampianarina. Mahagaga ny fifanipahan’ny tanjona voalaza sy ny fihemotry ny sehatra fampianarana fambolena, nihena ny isan’ny Lycée Agricole sy Collège d’Agriculture.
Tsy mifanandrify amin’ny diplôma maro matetika ny asa vitsy eto an-toerana, samy very hasina na ny asa na ny fianarana. Araky ny fiteny «tsy misy ny asa tsy manana fahamendrehana», marina angamba izany raha toa tsy misy ny karama azo lazaina ho tsy mendrika. Samy mahatsapa ny fahasarotan’ny fandanjalanjana ny karama hanakaiky ny fiheverana azy ho rariny, ny vidi-piainana ity misavaona andro aman’alina tsy manaraka an’izay na ny karama na ny fidiram-bola amin’ny asa an-tselika.